သင်၏စီးပွားရေးကိုကူညီရန်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုနည်း Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 6, 2014 တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 6, 2014 Douglas Karr
ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ကိရိယာများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ထင်ရပေမည်။ သင်သာအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစီးပွားရေးအတွက်အသုံးပြုသည်.
ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသင်၏စီးပွားရေးအတွက်တန်ဖိုးမရှိသောတပ်မက်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ်အလွယ်တကူယူမှတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏စီးပွားရေးစွမ်းအားကိုလျှော့တွက်ကြသည်။ သို့သော်လူမှုရေးသည်တွစ်တာနှင့်ကြောင်ဓာတ်ပုံများထက်များစွာသာသည်။ ယခုတွင်ဖောက်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်၊ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အတူလိုက်နာရန်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်ရည်ညွှန်းချက်များရယူရန်နှင့်သူတို့၏ကွန်ရက်များနှင့်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေရန်။ ဟုတ်တယ်
ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုသောစျေးကွက်များအတွက်သိသာထင်ရှားသည် စျေးကွက်၏ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြသည် သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း၊ လူမှုမီဒီယာစာမေးပွဲ လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာဘတ်ဂျက်များကိုနောက် ၅ နှစ်အတွင်းနှစ်ဆတိုးမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်!
အံ့သြစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ကို client တိုင်းကို social media ထဲကိုခုန်ချခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့မှာသူတို့အွန်လိုင်းတည်ရှိမှု၏အခြားအုတ်မြစ်များမရှိသည့်နေရာတွင်မကြာခဏတွေ့ရှိရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောဆိုဒ်မရှိပါ။ သူတို့မှာပုံမှန်ဆက်သွယ်ဖို့အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုမရှိဘူး။ သူတို့ကစကားဝိုင်းပြောင်းမှုသို့လည်ပတ်မှုမောင်းနိုင်စွမ်းမရှိ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကြည့်ရှုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ site ကိုသုတေသနပြုရန်နှင့်သူတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ရှာဖွေနိုင်သည့်စွမ်းရည်မရှိပါ။
လူမှုမီဒီယာသည်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူမှုမီဒီယာမှတစ်ဆင့်သင်တုန့်ပြန်မှု၊ ရိုးသားမှုနှင့်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပရိသတ်ကမျှော်လင့်သည်။ သင်အဲဒီလိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ တုန့်ပြန်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီများကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်လူမှုမီဒီယာဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏမှတ်ယူတတ်ကြသည်။ သို့သော်လူမှုရေးမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိသည်။
အဆောက်အ ဦး အာဏာပိုင် - သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးလေးစားခံရရန်ဆန္ဒရှိပါကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကြီးမားစွာရှိနေခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။
နားထောင်နေသည် - ဒါဟာလူမှုရေးမီဒီယာတွေမှာမင်းကိုစကားပြောတဲ့လူတွေပဲမဟုတ်ဘူး၊ မင်းအကြောင်းပြောနေတာကအရေးကြီးတယ်။ က စောင့်ကြည့်မှု သင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမဟုတ်သောသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏စိတ်ဓါတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားပြောဆိုမှုများကိုရှာဖွေရန်မဟာဗျူဟာသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး - အခြေခံအသံထွက်နေသော်လည်းလူများနားထောင်နေသည့်လိုင်းများကိုအသုံးပြုရန်သေချာသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောသတင်းများ (သို့) ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိပါကသင်၏လူမှုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည်သင်၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သွားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု - သင်၏လူမှုမီဒီယာလိုင်းများသည်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုအတွက်ဖြစ်သည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ သူတို့သည်အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများဖြစ်သဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ကျေနပ်လောက်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်သင်၏စွမ်းရည်သည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
အထူးလျှော့စျေး - အထူးသီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အထူးလျှော့စျေးများ၊ ကူပွန်များနှင့်အခြားငွေစုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများရှိတော့မည်ကိုသိလျှင်လူများစွာသည်စာရင်းသွင်းမည်။
လူသား - အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကြွေးကြော်သံများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု၏အတွင်းပိုင်းကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုသိပ်မပေးနိူင်သော်လည်းသင်၏လူများကလုပ်ပေးသည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာရှိနေခြင်းသည်သင်၏နောက်လိုက်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်နောက်ကွယ်ရှိလူများကိုမြင်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးသည်။ အသုံးပြုပါ။
Value ကိုထည့်ပါ - သင်၏လူမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည်အမြဲတမ်းသင့်အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့သူတို့ဟာအမြဲတမ်းမင်းအကြောင်းမဖြစ်သင့်ဘူး။ သင့်ဖောက်သည်များကိုမည်သို့တန်ဖိုးမြှင့်နိုင်မည်နည်း။ သင်၏ ၀ ယ်ယူသူများတန်ဖိုးထားမည့်အခြား site တစ်ခုတွင်သတင်းသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ မျှဝေပါ။
ဒီကနေ infographic ဟုတ်တယ် Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ နှင့်အခြားလူမှုရေးပလက်ဖောင်းများတွင်စတင်ပါ ၀ င်လိုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ခိုင်မာသည့်အကြံဥာဏ်များပေးသည်။ သင်၏အချက်အလက်စာမျက်နှာများကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ သင်က spammer ကဲ့သို့အသံမထွက်နိုင်ပါ။
Tags: လူမှုမီဒီယာ profile များကိုဖန်တီးပါလူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မွမ်းမံမှုဘယ်လောက်ရှိသလဲလူမှုမီဒီယာတွင်နာရီမည်မျှရှိသည်ဘယ်လောက်လူမှုမီဒီယာ updates များကိုဘယ်လောက် twitter updates များကိုဘယ္လိုလူမှုမီဒီယာကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲရက်ရာဇာလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်းကိုအကြံပြုချက်များ
6:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 49
လူမှုမီဒီယာသည်ယနေ့အွန်လိုင်းလောကတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ကောင်းမွန်သောလူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်တစ်ခုမျှအခြားမည်သည့်အရာမျှမပါလျှင်သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုတွေ့ရသောကြောင့်စျေးဝယ်သူများသည်သူတို့နှင့်အတူစျေးဝယ်နေသောကုမ္ပဏီကိုယုံကြည်စိတ်ချလိုကြသည်။ သင့်တွင်နောက်လိုက်များနှင့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများပါ ၀ င်သောလူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်သင်၏ visitors ည့်သည်များအတွက်ချက်ချင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
8:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 45
Great post ။ ထုတ်လုပ်မှုသည်ယခင်ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထုတ်လုပ်သူများသည်၎င်းတို့၏စားသုံးသူများနှင့်လွယ်ကူမြန်ဆန်သောနည်းလမ်းများဖြင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ လူမှုမီဒီယာသည်လူတို့အားထိရောက်စွာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိရောက်စွာရောက်ရှိရန်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ သင်၏စာရင်းထဲသို့ပေါင်းထည့်ရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများအားလုံး၊ ပုံများ၊ ပရိုဖိုင်းပုံများ၊ အရောင်ကုဒ်များနှင့်အချက်အလက်အရအမြဲတသမတ်တည်းဖြစ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအားမှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိသည်ဟုခံစားရစေပြီးအထင်အမြင်လွဲမှားစေပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်အသားကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေလ 30, 2016 မှာ 9: 19 AM
အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူမှုမီဒီယာသည်ယနေ့ခေတ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အထူးသဖြင့်အေဂျင်စီများအတွက်အစားထိုးမရနိုင်ပါ။ B2C ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏မကြာခဏငယ်ရွယ်သောပစ်မှတ်ထားပရိသတ်ထံရောက်ရှိရန်နှင့်လျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အားကိုးသည်။ Buffer, Hootsuite နှင့် Socialhub.io ကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်ဤအချက်အတွက်လိုအပ်သည်။ နောက်မျိုးဆက်ကြော်ငြာများသည်စကားပြောဆိုမှုများဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလက်ခံရန်နည်းပညာကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သိသိသာသာကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။